Apple မှ ပေးဆောင်သော အာမခံ ကုန်ကျစရိတ်များသည် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် လျော့ကျလာသည်။ ကျွန်တော်က mac ကပါ။
Apple မှ ပေးဆောင်သော အာမခံ ကုန်ကျစရိတ်သည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် လျော့ကျသွားသည်။
Apple ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုသည် အာမခံချက်အောက်တွင် ၎င်း၏စက်ပစ္စည်းများ၏ ပြဿနာအားလုံးကို ကာမိစေရန် ထင်မြင်ပြီး ကုမ္ပဏီအချို့က ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များအတွက် အစားထိုးပရိုဂရမ်များထည့်သည့်အခါ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အများစုက မသိကြပါ။ MacBook ၏လိပ်ပြာကီးဘုတ်ကိစ္စကဲ့သို့ငါပျက်ကွက်။
ဤ Apple လိပ်ပြာကီးဘုတ်များသည် ယနေ့ခေတ်တွင် ပြုပြင်မှုပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ထိုအချိန်မှစ၍ဖြစ်သည်။ 2015 ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ 12-လက်မ MacBook နှင့်အတူစတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးအချို့သောပြဿနာများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။. ဤအရာများသည် Apple အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးစရိတ်အဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုထားသော်လည်း ဤအရာအားလုံးသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က အာမခံမှရရှိသော ကုန်ကျစရိတ်များ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်ဟု ထင်ရသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ဤကီးဘုတ်များကို ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းကြောင့်သာမက စက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲရန်မလိုဘဲ သင့် crystals အားလုံးကို အစားထိုးနိုင်စေသည့် iPhone 12 တွင် သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများ ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။
အာမခံငွေ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို Macs ပေါ်တွင် အာရုံစိုက်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးနိုင်သော ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ ပြုပြင်၍မရသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ပြောဆိုကြသောအခါ၊ စက်ကိရိယာ အပြည့်အစုံကို ပြောင်းလဲရပါမယ်။ ကုန်ကျစရိတ်က သိသိသာသာ ပိုများတယ်။
Apple မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် ကုမ္ပဏီသည် လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အာမခံတောင်းဆိုမှုများတွင် ဒေါ်လာ ၂.၆ ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် 45 ခုနှစ်တွင် သုံးစွဲခဲ့သည့် ဒေါ်လာ 4.600 ဘီလီယံထက် 2016% နီးပါး လျော့နည်းသည်။ ဤကွာခြားချက်များသည် ဆက်လက်ကြီးထွားလာနေပြီး အာမခံချက်တွင် ယူရိုဘီလီယံပေါင်းများစွာကို ချွေတာနိုင်စေရန် Apple သည် ၎င်း၏ hardware ကို တတ်နိုင်သမျှ ပြုပြင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ လက်ရှိတွင် ဤအရာများသည် သုံးစွဲသူအတွက် လုံးဝအခမဲ့ လိပ်ပြာကီးဘုတ် အစားထိုး ပရိုဂရမ်ပါရှိသော Mac များဖြစ်သည်-
MacBook (Retina၊ 12 လက်မ၊ အစောပိုင်း 2015)
MacBook (Retina၊ 12 လက်မ၊ အစောပိုင်း 2016)
MacBook (Retina၊ 12 လက်မ၊ 2017)
MacBook Air (Retina၊ 13 လက်မ၊ 2018)
MacBook Air (Retina၊ 13 လက်မ၊ 2019)
MacBook Pro (၁၃ လက်မ၊ ၂၀၁၆၊ Thunderbolt 13 port နှစ်ခု)
MacBook Pro (၁၃ လက်မ၊ ၂၀၁၆၊ Thunderbolt 13 port လေးခု)
MacBook Pro (၁၅ လက်မ၊ ၂၀၁၆)
သေချာသည်မှာ ဤကုန်ကျစရိတ်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျော့ကျသွားပြီး ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီအတွက် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်သော်လည်း ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများတွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ပြဿနာနည်းပါးသောကြောင့် သုံးစွဲသူများအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။ MacRumors.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » MacBook » Apple မှ ပေးဆောင်သော အာမခံ ကုန်ကျစရိတ်သည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် လျော့ကျသွားသည်။
Safari Technology Preview ဗားရှင်း ၁၂၇ ကိုရပြီ
Mac အတွက် Logitech MX Keys Mini အသစ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။